မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း, ငါးကန်ရှိကပ်ပါးရောဂါများမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီးဖြစ်ပွားမှုမြင့်မားသည်. ငါးကပ်ပါးရောဂါသည်ဇူလိုင်လမှအောက်တိုဘာလအထိပျံ့နှံ့မှုအများဆုံးဖြစ်သည်, ကပ်ရောဂါအချိန်သည်ကြာရှည်နေသည်, နှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုလေးနက်သည်. အများအပြားကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းများယခုမိတ်ဆက်ကြသည်.
တရုတ် Echinococcus ရောဂါ: ဖျားနာနေသောငါးများသည်အသက်ရှူရခက်ခဲသည်, နာကျင်ခြင်း, အဆိုပါပါးဟက်အပေါ်ချွဲတိုးတက်လာခဲ့သည်, နှင့် Gill နန်းကြိုးအမျှင်လေးများ၏ Whitening. တီကောင်အမများသည်ငါးကြီးများကိုချိတ်ဆက်ရန်ချိတ်ကြီးများကိုအသုံးပြုသည်. သူတို့ကြီးမားသောနံပါတ်များအတွက်ကပ်ပါးအခါ, များစွာသောသေးငယ်သောအဖြူရောင်မွှေးများသည်ပါးချိုင့်ဝှမ်းတွင်ကြီးထွားကြသည်, ဒါကြောင့်လည်း gill ပိုးရောဂါဟုခေါ်သည်. တရုတ်ငါးကြင်းသည်မြက်ပင်ပေါ်၌ကပ်ပါးပိုးများသာရှိသည်, shochu နှင့်အနီရောင်မျက်လုံးများရောက်ရေချိုငါး, အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် silver carp သည် silver carp နှင့် bighead carp ကိုသာကပ်ပါးစေပါသည်. အနာရောဂါစွဲနေသောငါးများသည်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်လှော်ခတ်သွားသည်သို့မဟုတ်ရေကူးသည်, အမြီးတောင်ရေခဲမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ထိတွေ့သည်, နှင့်အနာရောဂါစွဲငါးအလေးချိန်, ၎င်း၏ကြီးထွားမှုကိုဆီးတားခြင်းနှင့်ပင်သေဆုံး.
Dactylopsis: အနာရောဂါရှိသောငါးများ၏ဂျီယာကြိုးများတိုးများလာသည်, အားလုံးသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖျော့သည်, အသက်ရှူခက်ခဲသည်, ပါးဟက်အဓိကရေပေါ်နေကြသည်, နှင့်ပိုးကောင်များမျက်စိမမြင်နှင့်အတူကြည့်ရှုရန်မလွယ်ကူပါ. လတ်ဆတ်သောဂျီကြိုးအမျှင်လေးများကိုအဏုကြည့်မှန်ပြောင်းအောက်တွင်ယူဆောင်သွားနိုင်ပါသည်။. ပိုးကောင်များသည်ငါး၏ပါးတစ်ရှူးများကိုဖျက်ဆီးပြီးငါးများကိုသေစေပါသည်.
ဦး ခေါင်းရောဂါ: ဤပိုးကောင်သည်ငါး၏ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကိုကပ်ပါးစေနိုင်သည်. တီကောင်၏ပထမတစ်ဝက်သည်အိမ်ရှေ့တစ်ရှူးများသို့ထိုးကျသွားသည်, နှင့်ဒုတိယတစ်ဝက်ထိတွေ့နေသည်. ပြင်းထန်စွာကူးစက်တဲ့အခါ, ငါးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ minuscule နဲ့တူလှပါတယ်, ဒါကြောင့်ဟုခေါ်သည် “minion ရောဂါ” . ဘယ်အချိန်မှာငွေကြောင်ဤရောဂါနှင့်အတူကူးစက်ဖြစ်ပါတယ်, အရေပြားတစ်သျှူးရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်ရောင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်, သလဲသီးအနီရောင်ကင်းမြီးကောက်ကိုဖွဲ့စည်းသည်. ဘယ်အချိန်မှာမြက်ငါးကြင်း, ငါးကြင်း, စသည်တို့. ဒီရောဂါကူးစက်လျက်ရှိသည်, အကြေးခွံမကြာခဏဖြစ်ကြသည် “စိတ်ပျက်လက်ပျက်” nicks သို့.
the ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုတိုးတက်အောင်ဆောင်းရာသီအပြီးသို့မဟုတ်နွေ ဦး ရာသီတွင်မိုးရာသီမတိုင်မီတွင်, ပိုးသန့်ဆေးဘို့ quicklime ကိုသုံးပါ, တစ်သောက်သုံးသောနှင့်အတူ 25-40 g / m3. အခုအချိန်တွင်, ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနည်းပါးပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုသက်သာစေသည်.
disin ပိုးသန့်ဆေးပြီးနောက်, သတ်ပစ်ရန်သမားရိုးကျပိုးသတ်ဆေးကိုသုံးပါ 90% ကြည်လင် trichlorfon 0.7 g / m3 သို့မဟုတ်အသစ်တစ်ခုကိုပိုးသတ်ဆေးတစ်ချိန်က, နှင့်ဆေးညွှန်းညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီဖြစ်သင့်သည်.
medicinal ငါးကိုဆေးဖက်ဝင်ရေချိုးရန်မထည့်မီ, အသုံးပြုသည် 20 အဘို့အပိုတက်စီယမ်နိတ်၏ g / m3 15-20 မိနစ်သို့မဟုတ် 500 အဘို့အ trichlorfon ၏ဂရမ် / m3 15 မိနစ်များ.
④သိုလှောင်မှုသိပ်သည်းဆများလွန်းလျှင်သို့မဟုတ်ကိုက်ညီမှုမှာကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုမရှိပါက, လှုပ်ရှားမှုအတွက်ငါးရဲ့အာကာသအတော်လေးလျှော့ချပါလိမ့်မည်, နှင့်ငါး adrenal ဟော်မုန်းအလွန်ထုတ်ပေးလိမ့်မည်နှင့်သူတို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစွမ်းသတ္တိကိုလျော့နည်းစေလိမ့်မယ်, ထိုသို့အားဖြင့်ရောဂါကူးစက်မှုနှင့်ကူးစက်မှု၏အခွင့်အလမ်းကိုတိုးမြှင့်.
100 trichlorfon ၏ဂရမ်သို့ရောနှောနေကြသည် 30 ဖွဲသို့မဟုတ်ပေါင်းစပ်အစာကျွေးခြင်းနှင့်ကျွေးမွေး၏ကီလိုဂရမ်4ရက်ပေါင်း.